चर्चामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनकी ३१ बर्ष कान्छि ‘गर्लफ्रेण्ड’, को हुन् यी सुन्दरी ? – Sandes Post
चर्चामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनकी ३१ बर्ष कान्छि ‘गर्लफ्रेण्ड’, को हुन् यी सुन्दरी ?
May 4, 2022 409
युक्रेनमा रुसले लगातार आ क्रमण गरिरहेको छ । विश्वभरी नै रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आलोचना भइरहेको छ । यही बीचमा उनको निजी जीवनको पनि चर्चा बढेको छ ।
बेलायती मिडियाले रुसी राष्ट्रपतिकी कथित गर्लफ्रेण्डका विषयमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।
पुटिन निकै रोमान्टिक भएको बताइन्छ । करिब १ दशकदेखि उनको नाम एलिना कबाएवासँग जोडिने गरेको छ । एलिना जिम्नास्टिक खेलाडी हुन् । ३८ वर्षकी एलिनाले ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितिसकेकी छिन् ।
एलिना राष्ट्रपति पुटिनका जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा समेत भएको दावी गरिन्छ । २००८ मा एलिनाको नाम पहिलो पटक राष्ट्रपति पुटिनसँग जोडिएको थियो । मिडिया टाइकुन र केजीबीका पूर्व जासुस अलेक्जेण्डर लेभेदेवले मस्कोबाट प्रकाशित हुने उक अखबारमा यो दावी गरेका थिए । २०१३ मा पुटिनले आफ्नी पत्नी ल्युडमिलासँग सम्बनधविच्छेद गरेका थिए ।
एलिनाले आफूलाई राष्ट्रपति पुटिनकी पार्टनर भनिएको दावी गलत भएको बताएकी थिइन् । तर, एलिनाको सफाइले यी दुईको सम्बन्धका बारेमा चलिरहेका हल्लामा विराम लागेन । उनीहरुले इंगेजमेन्ट र बिहे गरेको दावी गर्न थालियो ।
२०१६ मा पहिलो पटक एलिना सार्वजनिक रुपमा औंठी लगाएकी देखिइन् । त्यतिबेला उनले औंठीलाई क्यामेराबाट लुकाउँदै गरेको पनि देखियो । त्यसपछि उनी कैयौं पटक यो औंठी लगाएको अवस्थामा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिइन् ।
२०१७ मा उनी गर्भवती भएको हल्ला चलेको थियो । खासमा त्यतिबेला उनी एक जिम्नास्टिक प्रतियोगितामा भाग लिन गएकी थिइन् । यो कार्यक्रममा उनी खुकुलो पहिरनमा देखिएकी थिइन् । त्यतिबेला उनले आफ्नो बच्चासहितको पेटको आकार लुकाउनका लागि यस्तो खुल्ला कपडा लगाएको दावी गरिएको थियो ।
पुटिन र एलिनाका बच्चाका विषयमा चर्चा त्यतिबेला सुरु भयो जब दुईका एकसाथ भएका तस्वीर सार्वजनिक हुन थाले । तर, रुसी राष्ट्रपतिले आफ्नो परिवार र निजी जीवनका कुराहरुलाई सधैं गोप्य नै राखेका छन् । उनका पूर्वपत्नीबाट जन्मिएका छोराछोरीको बारेमा पनि सार्वजनिक रुपमा धेरै जानकारी छैन ।
एलिना रुसकी नेता, मिडिया म्यानेजर र अवकाशप्राप्त रिदमिक जिम्नास्ट हुन् । एलिनाको जन्म उज्वेकिस्तानमा भएको थियो । उनको जन्म हुँदा उज्वेकिस्तान सोभियत संघमै थियो । १२ मे १९८३ मा एलिनाको जन्म भएको थियो ।
आफ्ना पिताजस्तै एलिना पनि खेलकुदमा करिअर बनाउन अगाडि बढिन् । उनको खेलकुदको यात्रा ३ वर्षको उमेरमै सुरु भएको थियो । किशोरी हुँदासम्म एलिनालाई रिदमिक जिम्नास्टिकको उदाउँदी ताराको रुपमा हेर्न थालिसकिएको थियो । सन् २००० मा सिड्नीको ओलम्पिकमा १७ वर्षको उमेरमा एलिनाले रिदमिक जिम्नास्टिकमा कास्य पदक जितिन् । ४ वर्षपछि २००४ मा एथेन्स ओलम्पिकमा उनले स्वर्ण पदक जितिन् ।
एलिनालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल जिम्नास्टमध्ये एक मानिन्छ । उनले आफ्नो करिअरमा २ ओलम्पिक मेडल, १४ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप र २१ युरोपियन च्याम्पियनसिप जितेकी छिन् । खेलबाट सन्यास लिएपछि उनले राजनीति गर्न थालिन् । उनी युनाइटेडरुस पार्टीबाट सांसद बनिन् । त्यसपछि उनलाई नेशनल मिडिया ग्रुपको अध्यक्ष बनाइयो । डिसी नेपालको सहयोगमा
Prevघटनाका नाइके भनिएका दुर्गेशले श्रीमती र छोरा सँगै लिएर पललाई भेटे, ३० मिनेट कुराकानी !
Nextदाँतको बीचमा खाली ठाउँ छ? त्यसैले बुझ्नुहोस् कि तपाई धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, जान्नुहोस् तपाईमा के गुणहरू छन्
लामो समयपछि गायिका समिक्षा अधिकारीले लेखिन् मार्मिक स्टाटस
‘केजिएफ २’ले बनायो नयाँ रेकड, १५ दिनमा एक हजार करोड कमाउदै आरआरआर’ लाई उछिन्दै